Dhimasho & dhaawac ka dhashay goob heeso ka socdeen oo duntey Video+Sawiro – SBC
Dhimasho & dhaawac ka dhashay goob heeso ka socdeen oo duntey Video+Sawiro
Dhacdo argagax & naxdin leh ayaa ka dhacdey habeen hore gobolka Indiana ee wadanka Mareykanka ka dib markii uu soo dumay masrax faneed la doonayey in lagu soo bandho riwaayad waxaana halkaasi ka dhacay dhimasho & dhaawac.
Wakaalada wararka Reuters ayaa soo warisey in ugu yaraan 5 qof ay dhinteen halka 40 kalena ay ku dhaawacmeen mashaqadaasi iyadoo dadka dhaawaca ah uu ka mid yahay wiil 17 sano jir ah oo la sheegay inaanu dib dambe lugihiisa ugu socon doonin ka dib markii dhabarka uu ka jabay, sidoo kale waxaa dadka dhaawaca ah kamid ah dad qaba dhaawacyo halis ah, iyadoo qaarkood la sheegay inay u dhaw yihiin geeri.
Dhacdadan oo dhacdey habeenimadii sabtada ayaa waxaa ugu wacan ka dib markii dabelyo xoogan ayku dhufteen goobta lagu wadey in lagu qabto bandhig faneedka waxaana gabi ahaanba soo dumay saqafka masraxa ay ka heesi lahaayeen fanaaniinta iyadoo saqafka uu ku soo dumay ama ku soo dhacay dadkii halkaasi ku sugnaa,.
Cabaad & qaylo dhaan ba’an ayaa ka dhacdey dadkii boqolaalka ahaa ee goobtaasi ku sugnaa waxaana la galay in laga dulqaado saqafka soo dumay dadkii uu ku farsiitey, iyadoo goobtaasi goor dambe ay soo gaareen kooxaha gurmadka & ciidamada Booliiska.
Taliya ciidamada Booliiska gobolka Indiana Sgt. Dave Bursten ayaa shir saxaafadeed oo uu qabtey wuxuu ku sheegay in dhacdadan naxdinta leh ay ka dhalatey dabelylo xoogan oo saacadii ku socdey 60Km.
Bandhig faneedkaasi ayaa waxaa heesi lagu wadey inay ka tumaan kooxda Maroon Five & waliba fanaanada Janet Jackson.
Si aad u Daawato Video ku saabsan dhacdadan argagaxa leh & qaylada & cabaadka dadkii goobtaasi u yimid daawashada bandhig faneeda linka hoose ka daawo.